Kuqalile ukuqoqwa kuka doti eMlazi – Sivubela intuthuko Newspaper
Kuqalile ukuqoqwa kuka doti eMlazi
UMasipala waseThekwini uqale uhlelo lokuthuthwa kuka doti eMlazi. Abalelwa ku 21 amaloli ajutshwe ukuba ahambele izindawo zase Mlazi kusuka mhlaka 1 Julayi.
Lolu hlelo luza ngemuva kwemizamo eminingi yobuholi bedolobha ukuxazulula ukuphazamiseka kokuqoqwa kuka doti. Umasipala usebenzise uhlelo lwawo lwangaphakathi kuze kube kuqashwa abazosebenza ngokuphelele.
UNdunankulu waKwa Zulu-Natali uMnu Sihle Zikalala wenze lesi simemezelo emhlanganweni abewubambe nabahlali base Mlazi ukudingida izingqinamba ngokuthuthwa kuka doti.
UMasipala usezinhlelweni zokuqasha ngokuphelele izakhamuzi zase Mlazi kube yizona ezibhekela ukuqoqwa kuka doti kulandela izinxushunxushu.
Oyinhloko ye Cleansing and Solid Waste Unit u Raymond Rampersad uthe: Ukuhlanza ilokishi sekuqalile. “Sizoqala ngokususa wonke udoti onesisindo, ikakhulukazi ngase mgwaqeni bese ngokuhamba kwesikhathi siqale uhlelo lokukhuculula zonke izigceme usuku nosuku.”
Idolobha lidlulisa ukuxolisa ngezinkinga ezize nokubambezeleka ekuqoqweni kuka doti. Izakhamuzi ziyakhuthazwa ukuba zisebenzisane nomasipala emizamweni yokwenza indawo ehlanzekile nenempilo kubo bonke.
UMZUVUKILE PRIMARY UZOMELA ELAKULELI E-SPAIN
U Sisulu uzohambela e Cornubia ksasa